1. Tora uye uuraye hutachiona hwakanyanya kushanda. Bvisa H1N1 pamusoro pe 99% mukati meawa rimwe chete.
2. Yakaderera kumanikidza kurwisa ne99.9% guruva filtration chiyero
3. Celling mhando yekumisikidza chero nzvimbo uye yekutengesa nzvimbo
Catalog: Airwoods Ceiling Mhepo Inonatsa
1. IniFD (Yakanyanya Munda Dielectric) tekinoroji yekuchenesa：
99.99% adsorption inoshanda inopesana ne PM2.5 zvidimbu. Nhanho nhatu kusefa. Kuchenesa matomu (akakura kupfuura PM2.5) ne pre-firita kutanga. Zvidiki zvidiki (≤PM2.5) zvinopinda nepamberi-firita zvicharapwa ne12V munda-kuchaja uye kupararira-kuchaja. Chekupedzisira, zvimedu zvinobhadhariswa zvinonamirwa pane iyo IFD firita.
IFD kusefa kunoshanda musimboti:
Iyo ifD yemhepo firita inoshandisa magetsi emagetsi kubatsira kubviswa kwecheturu kusvibiswa kubva mumhepo. Ngatiputsei maitiro acho matanho matatu akasarudzika.
1.Kupinza magetsi mubhadharo mumhepo:
Nhanho yekutanga mune ifD yekuchenesa mweya iri kupinza mweya nechaji yemagetsi. Izvi zvakafanana nemaitiro mukati meMweya Ionizer. Kamwe magetsi emagetsi paanounzwa mumhepo, zvinosvibisa zvinoyangarara mumhepo zvinotora charge iyi uye zvobva zvaita ions sezvo vakatakura chairo kana chisina kunaka pavari.
2. Kupfuura mweya nemusefa:
Mhepo yakatakura zvinhu zvakashatiswa izvi inoyerera inoyerera kuburikidza nefirita yemuviri. Iyo ifD firita inoita kunge jira rine huchi hweuchi. Mazinga euchi aya ingori nzira dzekuti mweya uyere uye akagadzirwa nemapolymers.
3.Kutora zvinosvibisa nefaera:
Pakati peiyi mizhinji mitsara yemapolymer emhepo chiteshi pane matete machira ema electrode Aya mahwendefa emagetsi emagetsi anoburitsa simba rakasimba remagetsi iro rinokwanisa kukwezva zvidiki zvinosvibisa izvo zvino zvabhadhariswa Sezvo ese maficha ari kubhadhariswa, anokwezva zviri nyore akananga kuma electrode uye sezvavanofamba vachienda kunze, vanobatwa pamadziro enzira dzavari kupfuura nadzo.
IFD Kuchenesa Kubatsira:
Rudzi rwefirita runogona kufananidzwa zvakananga kupesana neiyo mafirita ndiwo mafirita anozivikanwa eHEPA. HEPA inomiririra High Kubudirira Particulate Mhepo Kununura. HEPA mafirita anoonekwa seyeyegoridhe standard kana zvasvika pakunatswa kwemhepo nhasi.
Musiyano mukuru pakati pe HEPA uye ifD mafirita ndeyekuti mafirita eHEPA anoda kuchinjwa kana ashandiswa kumusoro kumusoro. mafirita e ifD kune rimwe divi anogona kushandiswa sefirita yekusingaperi. Zvese zvinodiwa ndezvekuvachenesa yega mwedzi mitanhatu kana zvakadaro uye vadzokera kune yavo yekutanga mamiriro.
Ichi chine bhenefiti iri pachena kune vatengi sezvo isu tisingafanire kuburitsa mutengo wekutsiva firita mwedzi mishoma neyakajairwa HEPA firita.
2. Dual Fan Dhizaini:
Imwe mota ine mhepo mbiri-vhiri, mbiri fan yekupa yakakwana mweya uye yakaderera ruzha.
Iyo germicidal UVC mwenje inovhenekesa iyo photocatalytic zvinhu (dioxygentitanium oxide) yekubatanidza mvura neoksijeni mumhepo ye photocatalytic reaction, iyo ichakurumidza kuburitsa yakakwira mafungidziro epamberi egermicidal ion mapoka (hydroxide ions, superhydrogen ions, negative oxygen ions, hydrogen peroxide ions, nezvimwewo). Iyo oxidizing uye ionic zvimiro zveaya epamberi oxidation tunyowani anoora iwo makemikari anokuvadza magasi uye hwema nekukasira, kudzikamisa izvo zvakamiswa zvinhu, uye nekuuraya hutachiona hutachiona hwakadai sehutachiona, bhakitiriya, uye chakuvhuvhu.
4.Mhando dzakasiyana dzekuisa:
Pashure: Yakabatanidzwa Mhepo Kubata Units
Zvadaro: Yese DC Inverter VRF Yemamiriro Ekumesa System
Mhepo Inonatsa Zvigadzirwa
Hepa Uv Mhepo Inonatsa
Uv Mhepo Inonatsa Zvigadzirwa
Imwe nzira Blower Nyowani Mhepo Yekusvina Masisitimu
Nyowani Mhepo Disinfection Bhokisi reHVAC Sisitimu